Ahoana ny fomba hanafahana toerana fitahirizana amin'ny Mac | iPhone News
Ahoana ny fomba hanafahana toerana fitahirizana amin'ny Mac
Ignatius Room | | Mac, Fampianarana sy torolàlana
Ny sehatra fitahirizana dia ahafahantsika manana hatrany ny fampahalalana rehetra ilaintsika eny an-tanana na aiza na aiza. Rehefa zatra mampiasa azy ireo ianao dia tsy mieritreritra indroa momba ny fahafaha-mitahiry ny Mac manaraka anao ary, raha tsy hoe miasa manova video ianao, misafidy ny manana fahafahana kely indrindra ianao.
Na izany aza, na dia eo aza ny fisian'ny sehatra fitahirizana efa an-taonany maro, dia mbola maro ireo mpampiasa tsy manararaotra azy ireo na tsy mahita ny fiasa atolony. Raha izany no izy, dia azo antoka fa ho voatery hanao izany ianao matetika manafaka toerana amin'ny Mac.
1 Afindrao votoaty tsy ampiasainao
2 Hamarino ny habetsahan'ny rafitra
2.1 Inventory kapila X
3 Fafao ny fampiharana
3.1 Safidy hafa
Afindrao votoaty tsy ampiasainao
Ny zavatra voalohany tsy maintsy ataontsika mba hanafaka toerana amin'ny kapila mafy dia mampiasa fiara fitahirizana ivelany hamindra ny atiny rehetra izay tsy ilaintsika matetika.
Raha tsy hoe matetika ianao no miasa amin'ny fanovana horonan-tsary, na mila manana ny sarinao foana eo am-pelatananao, ity vahaolana ity dia hanampy anao manafaka toerana be dia be.
Raha tsy te-handeha avy eto ho any ianao miaraka amin'ny fitaovana fitahirizana, mety ho very izany, dia azonao atao ny misafidy manakarama toerana fitahirizana rahona. Ny sehatra izay manolotra antsika ny fampidirana tsara indrindra dia mazava ho azy iCloud. Na izany aza, tsy izany ihany no safidy.
OneDrive, Google Drive, Dropbox... dia safidy mahaliana izay miray tsikombakomba amin'ny macOS amin'ny alàlan'ny fampiharana azo ampiasaina amin'ity tontolo iainana ity.
Ary koa, ireo fampiharana ireo dia miasa toy ny iCloud, noho izany ireo rakitra izay nosokafanay amin'ny Mac ihany no alainy, mitazona ny ambiny ao amin'ny rahona.
Hamarino ny habetsahan'ny rafitra
Vantany vao nesorinay ny atiny izay mibodo toerana be indrindra amin'ny fitaovanay, fotoana izao hijerena ny rafitray. Rehefa mandeha ny fotoana, rehefa mametraka sy manala fampiharana isika, mitombo ny haben'ny rafitra macOSindraindray tsy mifandanja.
Fotoana vitsy lasa izay, hitako fa ilaina ny manadio ny ordinaterako rehefa avy nanamarina ny fomba Ny haben'ny rafitra Mac dia 140GB (araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambony).
Aorian'ny fanadiovana, nampihena ny haben'ny rafitra ho 20GB, izay, na dia mbola tafahoatra aza, dia kely kokoa ny toerana. Ny safidy omen'i Apple antsika hanafaka toerana fitahirizana amin'ny Mac dia tsy misy.
Mba hanamarinana sy hanafoanana ny habaka misy ny fizarana rafitra ao amin'ny ordinaterantsika dia afaka mampiasa ny fampiharana isika Inventory kapila X na daisydisk.
Tsy ireo ihany no rindranasa roa mamela antsika hanala ny habaka misy ny rafitra macOS. Izaho manokana dia manoro hevitra ireo apps roa ireo satria Nanana fahafahana nitsapa azy ireo aho ary nanamarina ny fiasan'izy ireo.
Manomboka amin'ny resaka Disk Inventory X izahay, fampiharana maimaim-poana miaraka amin'ny interface tsara tsy sariaka. Amin'ny fotoana voalohany hampandehanana ny fampiharana dia hamakafaka ny solosaintsika izy io ary hampiseho amintsika, karakarain'ny lahatahiry, ny habaka misy ny tsirairay.
Avy amin'ny fampiharana mihitsy, azontsika atao vonoy ny atiny rehetra izay heverintsika fa azo lany, toy ny angon'ireo rindranasa nofafanay, ary izany, ho an'ny macOS, dia anisan'ny rafitra.
Tsy ilaina ny manana fahalalana mandroso, fa tsara ny mahafantatra ny fomba fiasan'ny rakitra sy ny lahatahiry. Mba hisorohana ny mpampiasa tsy dia za-draharaha tsy ho afaka mamafa ny rakitra rafitra, ity safidy ity dia tsy hita ao amin'ny app.
Ianao dia afaka misintona fampiharana Disk Inventory X maimaim-poana amin'ny alàlan'ity manaraka ity rohy. Mila macOS 10.13 sy ambony ny fampiharana.
Raha tsy azonao tsara ny interface an'ny Disk Inventory X dia azonao atao ny manandrana DaisyDisk. Ny interface DaisyDisk sariaka kokoa noho ilay natolotry ny Disk Inventory X izy io, noho izany dia mety tsara ho an'ireo izay tsy ampy fahalalana.
kapila daisy, manolotra antsika interface tsara amin'ny endrika faribolana, mampiseho, amin'ny loko samihafa, ny lahatahiry misy ny fampahalalana, miaraka amin'ny habaka misy azy.
Tahaka ny Disk Inventory X, dia ahafahantsika miditra amin'ny lahatahiry sy vonoy ny votoatin'ny rindranasa tsy ampiasainay intsony.
Ity fampiharana ity, tsy mamela antsika hamafa ny rakitra rafitra, ka azo ampiasaina amin'ny olona kely fahalalana momba ny solosaina.
daisydisk dia mitentina $ 9,99. Saingy, alohan'ny hividianana azy dia azontsika atao ny manandrana ny fampiharana maimaim-poana tanteraka amin'ny alàlan'ny azy pejy web.
Fafao ny fampiharana
Apps no kely indrindra amin'ny ahiahinay, satria zara raha maka toerana amin'ny kapila mafy ataontsika raha oharina amin'ny habaka alaina amin'ny rakitra media.
Na izany aza, raha ianao no karazana mpampiasa izay mametraka rindranasa fantany miaraka amin'ny antony tokana hahitana ny toerana atolotry ny rindranasa rehefa mandeha ny fotoana. mety mampiahiahy izany.
macOS apetrany eo am-pelatananay fomba maro samihafa hamafa apps izay tsy ampiasainay na tiana hofafana tsotra izao mba hanesorana azy ireo.
Na izany aza, miaraka amin'ny fomba tokana, afaka mamafa ny fampiharana roa isika Napetrakay avy amin'ny Mac App Store na tahaka ireo izay nalainay tamin'ny Internet.
Ny fomba haingana sy mora indrindra hanesorana ny rindranasa amin'ny Mac dia nyMidira ao amin'ny Finder ary tariho mankany amin'ny dabam-pako ny fampiharana tiantsika hofafana.
Ity fomba ity dia mamela antsika mifidiana fampiharana maro ary vonoy tanteraka izy ireo amin'ny fitarihana azy ireo any amin'ny dabam-pako.
Raha tsy afaka manafaka toerana amin'ny solosainao ianao, satria mila ny rindranasa rehetra napetrakao ianao ary tsy afaka manao raha tsy misy ny votoaty multimedia izay notehirizinao, ny hany vahaolana ho antsika dia manitatra ny toerana fitahirizana ny fitaovantsika.
Indrisy, isaky ny taranaka Mac vaovao, Apple dia manao zavatra sarotra kokoa rehefa tonga amin'ny fanitarana ny fahatsiarovana RAM sy ny fitahirizana. Raha tsy manana fitaovana taloha ianao dia tsy ho afaka hanitatra ny toerana fitahirizana ny fitaovanao.
Raha mikasa ny hanavao ny Mac taloha ianao, tokony hojerenao, ny habaka ilainao dia afaka miasa tsy misy olana amin'ny habaka, na mampiasa fitaovana fitahirizana ivelany mba hahafahana manitatra (amin'izany fomba izany) ny toerana fitahirizana misy na mampiasa sehatra fitahirizana rahona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fomba hanafahana toerana fitahirizana amin'ny Mac
Ny iPhone 13 dia haingana kokoa noho ny Samsung Galaxy S22 Ultra vaovao